ShareX: Open Source App ho an'ny pikantsary amin'ny Windows | Avy amin'ny Linux
ShareX: Open Source App ho an'ny pikantsary amin'ny Windows
ShareX no fampiharana manaraka antsika ny loharanom-baovao misokatra for Windows hojerena. ShareX dia fampiharana kely nefa matanjaka amin'ny fitantanana sary (Pikantsary / Pikantsary) momba ny Operating System de Microsoft.
Teo aloha ny anjarany no fampiharana Sandboxie, izay ny asany na ny asany dia ny fampandehanana ny fampiharana ao anaty tontolo azo antoka sy mitokana.
ShareX ankoatry ny maha-application maimaimpoana ary misokatraMahavita misambotra na mandrakitra faritra misy ny solosaina, azonao atao ny mizara ireo sary namboarina, mampakatra sary, lahatsoratra na karazana rakitra hafa amin'ny toerana maro azo ampifanarahana sy azo ekena. Antony mahatonga azy ho tsara Pikantsary, mekanisma fizarana rakitra ary ilaina fitaovana famokarana.
Amin'izao fotoana izao dia tsy sehatra ifaneraserana izy io, noho izany dia misy ihany ny fampiharana azy Windows (.exe) ary ny azy kaody loharano (.zip / .tar.gz), Araka ny hita eo amin'ny tranonkalany GitHub ary misintona ao amin'ny nivoaka ny tsimbadika farany. Fanampin'izay, miaraka amin'ny a fanampiana tsara amin'ny fiteny maro, manarona fiteny Espaniôla, anglisy, alemana, frantsay, portogey ary italiana, ankoatry ny maro hafa.
1 ShareX: Pikantsary
1.1 Toe-javatra ankapobeny
1.2 Inona no vaovao amin'ny kinova 13.1.0
Amin'izao fotoana izao, ShareX mandeha ho an'ny stable version 13.1.0, miaraka amin'ny datin'ny famoahana ny Diaben'ny 01 tamin'ny 2020. Ary eo amin'ireo mampiavaka azy amin'ny ankapobeny dia ireto manaraka ireto dia voalaza:
Fampiharana loharano maimaimpoana sy malalaka.
Maherin'ny 12 taona ny fampandrosoana sy nanangona traikefa.
Maivana ary tsy misy dokam-barotra mihitsy.
Fampiasana tsotra sy haingana ho an'ny karazana mpampiasa sy amin'ny kinova Windows.
Ny fiasan'izy (workflows) dia azo ovaina (azo alamina).
Mamela anao hisambotra na handraikitra efijery feno, faritra na varavarankely amin'ny Desktop.
Mampakatra sy / na mandefa sary, sy endrika atiny isan-karazany, amin'ny tranonkala samihafa amin'ny Internet.
Ary nahitana fitaovana famokarana isan-karazany, toy ny:
Thumbnail Image Manager
Thumbnailer Video Manager
Inona no vaovao amin'ny kinova 13.1.0
Araka ny hevitry ny Changelog amin'ity kinova ity dia manana ny sasany amin'ireto fanovana manaraka ireto:
Taby vaovao antsoina hoe "Lohahevitra" no nampiana teo am-baravarankely fanovana fampiharana. Hanatsarana ny fitantanana ireo lohahevitra "Mazava" sy "Maizina" amin'ny ambaratonga ankapobeny.
Ankehitriny ny zana-tsary ao amin'ny varavarankely lehibe dia manohana safidy maro amin'ny alàlan'ny fihazonana ny bokotra Ctrl / Shift ary ny fisafidianana ireo sary kely. Ho fanampin'izay, ny zoro thumbnail dia manohana hitsin-dàlana fitendry ankehitriny, tsy misy afa-tsy amin'ny fizahana lisitra.
Ny safidy hitadiavana ny sary kely dia nampidirina tao amin'ny menio tsindrio havanana amin'ny varavarankely lehibe ary ny zana-bokotra "Exerction action" dia nampiana ny laharan'ny fikandrana lehibe, tamin'ny fampiasana ny menio tsindrio havanana.
Ny vokatry ny sary "Particle" dia nampiana. Ohatra, azo ampiasaina izy io hanampiana ny felam-panala amin'ny pikantsary, ary nesorina ny safidin'ny toerana tsy mitongilana ho an'ny mari-drano sary satria ny vokan'ny sary "Particle" dia azo ampiasaina amin'ny tanjona iray ihany.
Ny bokotra media sosialy dia nampiana eo ankavanan'ny farany amin'ny varavarankely lehibe, toa ny Twitter sy Discord.
Ny fitaovana antsoina hoe «Video Converter» dia nampiana, izay ahafahan'ny encoding mampiasa ireto encode ireto: H.264 / x264, H.265 / x265, VP8 (WebM), VP9 (WebM), MPEG-4 / Xvid, GIF, WebP ary APNG. Ho fanampin'ilay fitaovana antsoina hoe "Image Splitter", izay azo ampiasaina, ohatra, hanaovana emoji goavambe ho an'ny tambajotra Discord.
Izaho manokana, ireo fotoana vitsy ampiasako Windows, ShareX dia ahy ny fitaovana tianao indrindra de loharanom-baovao misokatra ho an'ny fitantanana ny Pikantsarin'ny.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «ShareX», fampiharana kely nefa matanjaka an'ny «Código Abierto» ho an'ny fitantanana ny Screenshot (Screenshot / Screenshot) momba ny Rafitra miasa Windows; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » ShareX: Open Source App ho an'ny pikantsary amin'ny Windows
Nanampy ny FreeBSD ny mpamorona ZFS Linux